नयाँ बर्ष, पुरानै म – Rohit Oli – Medium
Science, Tech, Social Media and Sports Lover.
नयाँ बर्ष, पुरानै म
भर्खरै बर्ष २०७२ हामीबाट बिदा भएर गएको छ । गएको बर्ष देशमा थुप्रै उताव चढावहरु आए । हामी सबैलाई थाहा छ, बर्षको सुरुवात मै देशले दर्दनाक भुकम्पको सामना गर्नु पर्यो, जुन यो शताब्दी कै ठूलो र दु:खद घटना हुन सक्छ । उसो त असोजमा नेपालीहरुको दशकौंदेखिको सपना - जनताद्वारा निर्मित ऐतिहासिक नेपालको संविधान जारी भयो । तर त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप असन्तुष्ट पक्षहरुले पछि आन्दोलनको घोषणा गरे र कैयौंले ज्यान समेत गुमाउन पर्यो । त्यसपछि, देशले अमानवीय किसिमको नाकाबन्दी समेत भोग्नु पर्यो । यावत घटनाक्रमका बिच गएको बर्ष सबै नेपालीहरुको लागि पिडादायी बर्षको रुपमा रह्यो । स्वाभाविकरुपमा मेरो लागि पनि बिर्सनलायक बर्षको रुपमा हुने नै भयो । कामना गरौं बि.सं. २०७३ को बर्ष त्यस्तो नहोस् ।
नयाँ बर्ष सुरु हुँदै गर्दा र पुरानो बर्षले बिदा लिदै गर्दा अधिकांश ब्यक्तिले आफ्ना बितेका घटानाक्रमहरुलाई समिक्षा गर्दै भावी योजनाहरु कोर्ने गर्छन् । तर, जुन मेरो लागि हालसम्म नौलो विषय रहदै आएको छ । यसपटक पनि म सोहि हर्कतले अघि बढ्ने दुश्प्रयास गर्दैछु । तर, कम्तीमा यो असन्तुष्टिलाई यसपटक बिचारको रुपमा तपाईं माझ पस्केर मन शान्त पार्ने कोसिससम्म गर्दैछु ।
हुन त मेरो जीवनमा गएको बर्ष कुनै उल्लेखनीय (सुखद र दु:खद दुबै) कुरा भएनन् । भुकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रताडित जीवन गुजार्ने म मात्र नभइ म भन्दा पनि बढी पिडा भोग्ने ती नेपालीहरु साक्षी छन् । तसर्थ, समग्रमा भन्नुपर्दा गएको बर्ष कुनै उल्लेख्य प्रगति बिना नै नेपालीहरुको पिडामा सहानुभूति प्रकट गर्दैमा दिनहरु बिते । जे जस्तो भएपनि बितेका कुरा बितिनै सके, ती सक्कीगए ।
अबको महत्वपूर्ण कुरो भनेको - यो नयाँ बर्ष आफुलाई कसरी अगाडि बढाउने; कस्ता योजानाहरु बनाउने; ब्यक्ति, परिवार, समाज र सम्पुर्ण राष्ट्रको उन्नतिको बाटो के हुने भन्ने नै हो । समाज र राष्ट्रको लागि हामी जस्ताले योगदान त के नै दिन सकिन्थ्यो र तर कम्तिमा आफ्नो र परिवारको भविश्यको लागि चिन्तन मननका साथ स्पष्ट योजना बनाई अघि बढ्ने सहि मौका हुन सक्छ- यो नयाँ बर्षको सुरुवात । हुन त यतिसम्मको ज्ञान र चेतना हामी सबैमा छ, तर अब यसलाई व्यबहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । ब्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने म यस्ता कुरामा सधै पछि नै रहे । कहिल्यै पनि नयाँ बर्षमा नयाँ तरिकाले सोच्ने र अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएन । नयाँ बर्षहरु आए गए तर म आफुलाई पुरानैरुपमा मात्र पाउने गर्छु । यस बर्ष पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाउने यथेष्ट संभावना हुदाँहुदै पनि यसको क्रमभंगतामा अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक भैसकेको महसुससम्म गरेको छु । आशा गरौं यो नयाँ बर्षले मलाई सत्बुद्धि प्रदान गरोस् ।
तपाईं पनि कम्तिमा नयाँ बर्षमा एउटा नयाँ गर्ने कोसिस मात्र भएनी गर्नु होला । "हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने?" नयाँ बर्ष २०७३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
Like what you read? Give Rohit Oliaround of applause.
Never missastory from Rohit Oli, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Rohit Oli